ဦးနေအေးကကျိုက်လတ်ကို တိတ်တခိုးပြန်လာပြီး၊မဖွားသင်ကို မျက်ရယ်ခံ ထိုးလိုက်သည်။
ထားတာ။ဘယ့်နှယ်လုပ်မလဲ.။စားဖို.က တစ်လသုံးဆယ်ထောက်နေသေးတယ်။ကျွန်မလဲရှက်တော့ ရှက်သားပေါ့"
"ဒီမှာမဖွားသင်-နင့်အိမ်ဂရံအပေါင်စာချုပ်လဲ နင်ပြန်ရမယ်။ငွေပိုလဲ ငါးရာလောက်နောက်ထပ်ရဦးမယ်ဆိုရင်
"ဟဲ့-သူ.သတ်လို. သူ.မှာရှိတဲ့စာချုပ်ပြန်ရပါတော့မလား။ငါပြောမှာက ရာဇ၀တ်မှုဖြစ်မယ့်ဟာမျိုး မဟုတ်ပါဘူး"
"ဒါဖြင့်ပြော....ဦးနေအေးကနှစ်ကိုယ်ကြားထဲ ပြောလိုက်ရာ မဖွားသင်က ခွက်ထိုးခွက်လန် ရယ်ပါတော့သည်။"
"ကဲ-ငါပြောတာ လွယ်လွယ်ကလေး မဟုတ်လား"
"အရာ(ကိုကို)ကျွန်မဆီမလာတာ လေးငါးရက်၊ရှိနေပြီနော်"
"စိတ်ညစ်ရင် ဖွားသင်ဆီ လာပေါ့၊ဒီကို လာရင်အရာ ပျော်တယ်မဟုတ်လား အရာ"
"အခုတော့ နားကပ် မ၀တ်တော့ဘူးလား"
"လူကကြီးလာရင် နားကပ်လဲ ကြီးကြီးပန်ပေါ့၊ကဲ-ကျွန်မပန်ပေးမယ်"
ရသည်။ကမန်းကတန်းနားကို၊စမ်းလိုက်တော့ သုံးလက်မလောက်၊ သော့ခလောက်တစ်ခု။
သောကြောင့်၊ဗလဲ့ဘမှာ မျက်စိမျက်နှာ ပျက်လာသည်။
Posted by မြန်မာပြည်ကိုလွမ်းတယ် at 21:02
စိုးထက် - Soe Htet ! 31 March 2008 at 22:00
မိုက်တယ်ဗျ ... အကြံကတော့ ရှယ်ပဲ :P
mmk 31 March 2008 at 22:17
HEARTMUSEUM 31 March 2008 at 23:33
မမေကတော့ လုပ်ပြီ..... ကောင်းခန်းမှရပ်ထားရတယ်လို့ D;
Nyein Chan Aung 1 April 2008 at 10:41
myatnoe 1 April 2008 at 16:44
waiting to ur writing .